Izindaba | Yinrich Technology
Ikhaya > Insiza ngemuva kokuthengisa& Incwadi yokufakazela
I-Yinrich inikezela ngomklamo wesakhiwo samahhala; Ukuhlangana kwamahhala nokufakwa; Ukukhiqizwa kwamahhala kokukhiqizwa kwamahhala kanye nokuqeqeshwa kweqembu lendawo; Amaresiphi wamahhala. Futhi unikeze isikhathi sewaranti kuze kube yiminyaka emibili. Yonke imishini ethengisiwe idluliselwa ngamafutha (ukuhlolwa kokwamukelwa kwefekthri) kanye ne-SAT (isivivinyo sokwamukelwa kwesiza).
Umugqa we-marshmallow ekhishwe ufakwe ngempumelelo futhi wahlolwa efektri yeklayenti lethu eBolivia, eSouth America
I-Yinrich yasungulwa ngonyaka we-1998. Ngokuhlinzeka ngezipesheli ezingama-23 kwinsimu ye-confectionery ukukusiza, i-Yinrich ingakusiza ungabi nandaba ukuthi ungasebenzisi ibhizinisi lakho elikhona ngokuthuthuka kwemishini yakho endala, noma umbono wakho omusha we-confectionery. Sithanda ukukusiza ukuthi ugweme ukuthontelana, ugcine isikhathi sakho esibalulekile futhi wandise i-ROI yakho (ubuyela ekutshalweni kwemali).
Amakhasimende ase-Uganda eze efektri i-YINRICH ezokwenza ukuhlolwa emshinini we-lollipop ngaphambi kokulethwa.
Ukuhlolwa komshini.Amakhasimende e-Uganda eza efektri ye-Yinrich ukwenza ukuhlolwa ngomshini weLollipop ngaphambi kokulethwa.Yonke imishini izokwenza ukuhlolwa kwefekthri ngaphambi kokusuka efektri.Futhi simema ikhasimende ukuthi lizohlola ukusebenzelana okusebenzayo.
Amakhasimende aseRussia eza efektri iYINRICH ezokwenza i-FAT (Factory Acceptance Test) ngaphambi kokuba kuthunyelwe imishini.
Isivivinyo somshini ngaphambi kokuphuma efektri.Amakhasimende aseRussia eza efektri ye-Yinrich ukwenza amanoni (ukuhlolwa kokwamukelwa kwefekthri) ngaphambi kokuba imishini ithunyelwe.Umugqa ngamunye ophuma efektri uzokwenza isivivinyo necala, ikhasimende lingabona umkhiqizo wecala.
Ulayini obekiwe kaMarshmallow wedluliswa yi-SAT (Site Acceptance Test) efektri yamakhasimende ethu e-Algeria, e-Afrika.
Ngemuva kokuhlolwa kokuthengisa.Umugqa we-marshmallow ofakwe okufakiwe wedluliswa yi-SAT (isivivinyo sokwamukelwa kwesayithi) efektri yekhasimende lethu e-Algeria, e-Afrika.Sihlinzeka ngezinsizakalo ze-Afterseles ngemuva komshini othunyelwe efektri yamakhasimende.